SHARAXAAD: Waatan Sababtii Liverpool Loogu Beegi Waayay Villarreal Ee Inter Milan Loogu Aadiyay Shalay - Laacib
HomeSerie ASHARAXAAD: Waatan Sababtii Liverpool Loogu Beegi Waayay Villarreal Ee Inter Milan Loogu Aadiyay Shalay
SHARAXAAD: Waatan Sababtii Liverpool Loogu Beegi Waayay Villarreal Ee Inter Milan Loogu Aadiyay Shalay
December 14, 2021 Apdihakem Omer Adam
Dad badan oo uu kamid yahay xiddigii hore ee kooxda Liverpool ee Michael Owen ayaa filayay in mar saddexaad la samayn doono isku aadkii UEFA Champions League ee shalay iyaga oo qabay in dhinaca Liverpool haddana qalad laga sameeyay.
Isku aadkii hore ayaa fashilmay oo qalad farsamo ku yimid kaddib markii kooxda Manchester United laga reebay kooxihii lagu aadinayay Atletico Madrid oo ay ahayd in sharci ahaan lagu daro.
Sharciyada wareega 16-ka ee Champions League ayaa ah inaysan isku beegmi karin kooxaha hal Group kasoo wada baxay iyo kooxaha isku dalka ka socda labaduba.
Kaddib cabashooyin ka yimid kooxo laga xusi karo Villarreal iyo Atletico Madrid, waxa lagu qasbanaaday in UEFA ay dib ugu celiso isku beeg-beega markale.
Mid kamida waxyaabihii shakiga kale keenay ee ka dhacay isku-aadkii labaad ayaa ahaa in Liverpool toos loogu aadiyay kooxda ree Talyaani ee Inter Milan iyadoo laga duway Villarreal walow ay caadin isku aadi karayeen.
Sababta ayaa ah in haddii Liverpool iyo Villarreal la isku beegi lahaa labada kooxood ee kaliya ee isku hadhay ay ahaan lahaayeen Juventus iyo Inter Milan oo isku Talyaani ah taasina aysan suurogalayn waana sababta si toos ah looga dhigay Liverpool v Inter Milan iyo Juventus v Villarreal.
Kooxda guuldarrada ugu weyn kala kulantay ku celinta isku aadka ayaa ahayd Real Madrid, maaha inay ka cabsi qabaan PSG balse waxa wax adag noqotay inaad kasoo gudubto Benfica oo aad u wareegto Paris.